जहाँ युवतीमाथि सोमबारको दिन केटाहरुलाई यस्तोसम्म गर्न दिइन्छ छुट ! — Imandarmedia.com
जहाँ युवतीमाथि सोमबारको दिन केटाहरुलाई यस्तोसम्म गर्न दिइन्छ छुट !
काठमाडौँ । दुनियाँका चलनहरु पनि कस्ता कस्ता ? दुनियाँमा यस्ता ठाउँ पनि रहेछन्, जहाँ सोमबारको दिन केटाहरुलाई मनलाग्दी गर्न छुट दिइन्छ । मध्य युरोपेली देशहरु पोल्याण्ड, चेक गणतन्त्र तथा पूर्वी युरोपेली देश युक्रेनमा एक खास सोमबार विशेष विदा हुन्छ । उक्त दिन युवकहरु आफ्नो मनपर्ने युवतीलाई मज्जाले भिजाउन पाउँछन् ।
ती देशहरुमा वेट मन्डे अर्थात् भिजेको सोमबार नामक पर्व मनाइन्छ । इस्टर पर्वको सोमबारका दिन त्यहाँ मानिसहरु एक अर्कालाई पानीले भिजाएर रमाइलो पर्व मनाउँछन् । यसरी एक अर्कामा पानी छेप्नाले पाप पखालिने विश्वास छ । तर एक खास कारणबाट केटाहरुलाई त्यसो गर्नमा छुट दिइएको हुन्छ ।
परम्परा अनुसार यदि गाउँ वा त्यस क्षेत्रकी सबैभन्दा सुन्दर महिलालाई यदि कुनै पुरुषले पानीले भिजाउँछ र ती महिलाले प्रतिवाद गर्दिनन् भने त्यो भिजाउने पुरुषले जिवनमा गरेका पापहरु मेटिन्छन् भन्ने विश्वास छ ।
तर समय बदलिएसँगै पछिल्लो समय केटाहरुले जो सुकै केटीहरुलाइ पनि पानीले भिजाइदिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त पानी हान्ने र प्रतिवाद गर्ने सिलसिलामा विवाद र झगडा पनि हुने गरेको छ ।
सोमबारको दिन केटाले केटीलाई पानीले भिजाएर पाप पखाल्छन् भने अर्को दिन मंगलबार केटीहरुका लागि छुट्टाइएको हुन्छ । त्यस दिन केटीहरुले केटालाई पानीले भिजाएर पाप पखाल्ने परम्परा छ । तर पछिल्लो समय चाहीँ सोमबारै केटा र केटीले एक आपसमा पानी हानाहान गर्ने गर्दछन् ।
यस्तै अर्को रोचक प्रसङ्ग
मान्छेहरुको शौख पनि आश्चार्य लाग्दा हुन्छन् । तपाई हाम्रो सोच र शैलीभन्दा धेरै टाढाका सोच भएका मानिसहरु पनि यो संसारमा छन् । यस्ता शौखिन मानिहरु आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको भरपूर प्रयोग गर्दै इच्चा पूरा गर्नेतर्फ तल्लिन रहन्छन् ।
आलिशान जीवन बिताइरहेका एक राजाको पनि यस्तै अनौठो शोख छ । उनी हुन्– अफ्रिकी मुलुक स्वाजिल्याण्डका राजा मस्वाती तृतीय । १५ जना श्रीमतीका साथ बसेपनि उनी सत्ता र शक्तिको दम्भमा अझै कुमारी किशोरीहरुलाई नग्न नचाउँदै पत्नी बनाउने चाहना राख्छन् ।
३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिका मालिक उनले आफ्ना पत्नीहरूलाई उपहार दिनका लागि झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका लग्जरी कार खरिद गरेका छन् । हालै राजाले आफ्ना १५ पत्नीहरूका लागि रोयल्स रोए तथा दर्जनौं बीएमडब्लु कारहरू खरिद गरेका थिए । हुन त ती राजाका १६ वटा पत्नी थिए । तीमध्ये १ जना पत्नीको मृत्यु भइसकेको छ ।
स्वाजिल्याण्डमा कैयन अनौठा परम्पराले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यहाँका राजाले हरेक वर्ष कुमारी किशोरीहरूको नग्न नृत्य आयोजना गर्दछन् र त्यहीँबाटै आफ्ना लागि नयाँ पत्नी छान्दछन् । त्यस्तो नग्न नृत्यमा सहभागी हुनका लागि किशोरीहरूलाई उर्दी जारी गरिन्छ र नआउनेलाई कठोर सजाय समेत दिइन्छ ।
अघिल्लो वर्ष आफ्नो बर्थडेको अवसरमा राजाले आफ्नो देशकै नाम परिवर्तन गरेका थिए । यसअघि देशको नाम स्वाजिल्याण्ड रहेकोमा उनले परिवर्तन गरी इस्वातिनी बनाएका छन् । तर पनि मानिसहरू त्यो देशलाई स्वाजिल्याण्ड नै भनेर चिन्दछन् । स्वाजिल्याण्डका राजा अर्बपति धनाढ्य हुन् । उनीसँग आफ्नै निजी जहाज र निजी विमानस्थल पनि छ । एजेन्सी
विश्वको एउटा यस्तो देश जहाँ मोटी केटीसँग मात्र बिहे गरिन्छ
अन्तरीक्षमा खुल्दैछ पहिलो होटल, यसो भन्छन बिज्ञ
अमेरिकाको एउटा सहर जहाँ बाख्रो बन्यो मेयर
संसारकै विषालु भ्यागुतो, करोडौँमा हुन्छ तस्करी
वन मान्छेको खोरमा ४ वर्षीय बालक खसेपछि भयो यस्तो मुटु काप्ने घटना
बिहे गर्न केटा नपाएपछि गाउँभरिका युवती दुलाहाको खोजीमा !
१३ वर्षमै बाबु बनेका एक किशोरको अनौठो बास्तविकता
अहिलेसम्म सबै भविश्यवाणी मिलाउँदै आएका यी बाबाले २०२१ का लागि गरे यस्ताे डरलाग्दो भविष्यवाणी, के भने त्यस्ताे ?
समुद्रबाट निस्कियो अनौठो जीव, रुखको जराजस्तै आकार (भिडियोसहित)